Iri nri nke gi | Martech Zone
Friday, February 6, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
You'll ga-ahụ etu esi were okwu a na ịntanetị. Mgbe m na-ekwu maka ụlọ ọrụ ịde blọgụ, M na-eji okwu ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ anyị na-eduga na-abịa kpọmkwem site… ụlọ ọrụ na ịde blọgụ.
Nke ahụ kwuru, nke a bụ foto na-akpali akpali nke m hụrụ site na StumbleUpon na Blog nke Scott Rope. Ikwu okwu banyere iri nri nke gi!
Kedu ụdị mgbasa ozi ị nwere ike nweta site na itinye ngwaahịa nke gị? Ọ ga-amasị m ịhụ ụfọdụ ihe atụ nke a!
Tags: ọrụ nnyefe datadata managementOdida: Isi ihe na-aga nke ọmaNchọgharị ọchụchọ engine laghachi na ntinye egosụọ ngọngọWordPress
Feb 6, 2009 na 1:41 PM
B2B ahia choro ihe ngosi karia, echefu echefu dika nke a.
Dika puputa ihe edere ederede, emere m otu maka akwukwo ntule m: o nwere nwoke no nga nke nwere onu ulo nke mechiri mkpọchi igwe Kryptonite. Isi okwu ya bu 'Onye Ohi Bike'.
Feb 6, 2009 na 5:20 PM
Doug, ọ bụ ezie na nke a na-eme nnukwu foto, eziokwu, n'echiche m, na-eme ahịa ahịa a.
N'ezie, ọ bụ naanị $ 500 nke ezigbo ego echebere n'elu ego adịgboroja, ndị mmadụ nwere ike iji ụkwụ ha gbalịa imebi ya. Otu onye nche nọ ebe ahụ iji hụ na ọ dịghị onye dara iwu ahụ nakwa na ndị mmadụ enweghị ike ịdebe ego ahụ ma ha mebie ya. -GizModo
Echere m na nkwalite a bụ ma ọ dịkarịa ala ntakịrị aghụghọ, n'ihi na naanị itinye ego ole na ole na ịnwe nchebe ugbu a na-egosi na nkwupụta banyere ngwaahịa ahụ karịrị ike n'ezie. Emela ị na-eche a obere deflated mgbe ị chọpụtara ihe ndị a?
Ọ bụghị n'ezie ihe atụ nke "iri nri nkịta gị." Nke ahụ bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ ngwanrọ maka ịnwale ule na ngwa ị mepụtara site na iji ha iji na-azụ ahịa gị. Ọ is ihe ị na-eme na Compendium, mana itinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ego na-adịghị adịgboroja na onye na-eche nche maka awa ole na ole na ngosipụta ọha na eze anaghị agba ahịa gị na ngwaahịa gị. Ka 3M wee “na-eri nri nke ha,” ha ga-eji iko nche ha chebe akụ nke ụlọ ọrụ nke ọma.
Ndi mmadu kwesiri ka ejiri obi eziokwu na nkwanye ugwu mesoo ha, ma jiri nganga jiri ihe ndi i meputara bu uzo di oke iji gosi ha na ikwere n’oru nke gi. Chịkọta foto-op na-achịkwa iji mepụta ugha ụgha yiri ka ọ bụghị eziokwu na nkwanye ùgwù. Nke a bụ stunt, ọ bụghị ngosipụta nkwado nke ntụkwasị obi na ngwaahịa gị. Echere m na 3M kwesiri ịzaghachi maka otu ndị mmadụ siri kọwaa foto a ma rịọ mgbaghara.
Feb 6, 2009 na 8:33 PM
Chaị - ị bụ onye nyocha nkịtị! (gbakwunye, ọ bụghị mkparị).
Re: Iri nri nke gị - ma ọ bụrụ na sistemụ a bụ sọftụwia ma ọ bụ mgbasa ozi, ọ baghị uru. Nke ahụ bụ echiche m ma ana m agbaso ya.
Re: Mgbasa ozi - ekele m bụ maka ihe okike metụtara mgbasa ozi. Ma ọ bụ stunt ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa; ọ na-eme ka ndị mmadụ chee echiche banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Na-eche na ebumnuche ahụ bụ ihe nkịtị - na e nwere ihe dị ka nde dollar abụọ n'èzí ebe 3M na-echekwa iko ha. Echiche m dị iche - naanị na ha chọrọ ịkọ akụkọ. Ozugbo m hụrụ foto a, m ghọtara akụkọ ahụ.
N'uche m, ekwenyere m na ọ bụ mgbasa ozi siri ike.
Feb 7, 2009 na 12:38 PM
Ya mere ị na-ekwu na ịchọpụta eziokwu mgbe ịhụ foto enweghị mmetụta na nghọta gị banyere mgbasa ozi? M na-ebu amụma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla hụrụ foto a wee mụta ihe na ọ bụ n'ehihie stunt, e nwere onye nche, naanị ị nwere ike ịgbanye iko ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ego niile adịgboroja-ga-eche na ọ ga-emebi. Nke a bụ ihe e ji mara nke ọjọọ mgbasa ozi: mgbe ịchọtara na ihe ị chere bụ eziokwu n’ezie abụghị.
Ọ bụ nnukwu echiche maka 3M igosipụta ike nke iko ha n'ihu ọha. Ma gịnị ma ị melite cube echedoro na brik brik na-agbado na iko mpempe akwụkwọ? Ma ọ bụ ịmepụta ala iko? Ihe ndị a na-egosi oke akụkọ nke bụ eziokwu kpamkpam!
Feb 7, 2009 na 8:51 PM
Anaghị m eme ihe n'eziokwu. Mgbasa ozi ọ bụla anyị na-ahụ n'oge a na-ekwubiga okwu ókè iji 'kọọ akụkọ', ma ọ bụ azụmahịa ụgbọ ala ma ọ bụ mgbasa ozi Google Adwords. Ọzọkwa, echeghị m na ebumnuche 3M bụ ịgha ụgha, ọ bụ naanị iwepụta mgbasa ozi okike.
N'okwu a, echere m na ha rụrụ ezigbo ọrụ. Ikpo okwute na iko agaghị enwe mmetụta (n'uche nke m). Nke ahụ ga-agwa 'ike' mana ọ bụghị 'nchekwa' nke ihe ahụ.
Ugbu a, enwere foto ma ọ bụ vidiyo ma ọ bụ akụkọ na-ekwu na enwere nde dollar na ngalaba ahụ wee hapụ ya maka ụbọchị 30 na ebe ọha na eze, na-enweghị nchekwa… mgbe ahụ m ga-ekwenye na gị. Agbanyeghị, 3M esoghị ebe ahụ na nke ọ bụla.
Ọ dịghị onye, ​​n'echiche ziri ezi ha ga-aga wee wuo ụlọ akụ ọhụrụ nke nwere nchekwa nke iko 3M mgbe ha hụsịrị nke a, ka ha ga-? Echeghị m.
Feb 7, 2009 n’elekere 2:42 nke abali
Nke ahụ bụ ezigbo visual visual! Ahụrụ m ahịrịokwu a n'anya oge niile 'rie nri nke gị'!
Feb 8, 2009 n’elekere 9:59 nke abali
Ndo Doug, mana m kwenyere na Robby na nke a. Mgbe mbụ m hụrụ foto ahụ enweghị m ike ikwenye na ụlọ ọrụ ga-enwe ntụkwasị obi na ngwaahịa ha na ha ga-etinye ọtụtụ ego n'ime ya, na-atụ ndị mmadụ ụjọ ịnwa izuru ya.
Aga m ahapụ ikwu na saịtị gị na-ajụ ma ọ bụrụ na ha nwere igwefoto vidiyo zoro ezo ọ bụla na-egosi ndị mmadụ na-agba mbọ (na ikekwe ada ada) imebi iko ahụ.
Ma ozugbo Robby wụfuru agwa banyere inwe onye nche, naanị iji ụkwụ gị na ịnwe ego adịgboroja, enwere m mmetụta aghụghọ.
Anaghị m eche na ọ dịkarịa ala 3M (M ka ga-azụta ihe edeturu ya) mana mgbasa ozi ahụ efunahụla m uru niile, agaghị m apụ n'ụzọ m ịzụta iko nchekwa ha.
Feb 14, 2009 n’elekere 2:43 nke abali
Tụle mkpọsa a malitere na Feb. 2005, M ga-asị na nke a na-enye ọhụụ ọhụrụ ọdụ ọhụụ. Enwere m olile anya na ndị otu PR / Marcom ka nwere mkpọsa google ha- nke a ga - eme ka ha pụọ.
Site na nkwukọrịta echiche, nke a bụ ihe ọhụụ na-achọpụta ngwa ngwa nke na-agwa ụdị ahụ okwu, na-eme ka ụkpụrụ ha sie ike ma na-eweta ozi dị ike. nke ahụ bụ ihe siri ike ịme na bọs na-akwụsị.
Aug 7, 2009 na 4:51 PM
O doro anya na Robby Sla Sla adịghị aghọta ụwa nke ahịa… ị na-ekwu maka nke a ugbu a abụghị, Robby? Mgbe ahụ, ọ dị ka ọ bụ ezigbo ngwa ahịa. Mgbasa ozi bụ maka ịmepụta ihe oyiyi a na-echefu echefu na uche nke onye na-eri ihe, na omume a agaghị apụ apụ. N'agbanyeghị gị inane mkpa na-atụle ya ziri ezi / adabaghị adaba, na n'agbanyeghị ma ngwaahịa n'ezie rụrụ ka ị ga-infer si mbiet…. ugbu a ị maara nke ọma ngwaahịa ya. Image nwere onyonyo anaghị echefu echefu nke iko nchekwa 3M n'isi gị. Ya mere? Masterful marketing, oge.